ရှုံးပှဲ (၁၁) ပှဲအထိ ဆကျလာနတေဲ့ Dendi ရဲ့ B8 အသငျး – Gaming Noodle
ရှုံးပှဲ (၁၁) ပှဲအထိ ဆကျလာနတေဲ့ Dendi ရဲ့ B8 အသငျး
ယခုနှဈအစောပိုငျးကမှ စတငျဖှဲ့စညျးထားခဲ့တဲ့ Dendi ရဲ့ B8 အသငျးဟာ လကျရှိ Dota2ပွိုငျပှဲမြား အတှငျးမှာ ဆိုးရှားတဲ့အခွအေနမြေားကို ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။ စတငျဖှဲ့စညျးခြိနျထဲက ယခုအခြိနျထိ အသငျးသားတဈဦးသာ အပွောငျးအလဲလုပျခဲ့ဖူးတဲ့ B8 အသငျးရဲ့ လကျရှိကစားသမားစာရငျးကတော့ Excalibur, Dendi, Ghostik, KingR နဲ့ LeBronDota တို့ပဲ ဖွဈကွပါတယျ။
LeBronDota & Dendi
B8 အသငျးအပွောငျးအလဲလုပျခဲ့တာကတော့ ယခငျက ကစားသမားဟောငျး pio65 နရောမှာ Excalibur ကို ထညျ့သှငျးလိုကျတာပါ။ ဒါပမေယျ့ မတျလ ၂၇ ရကျနကေ့ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ ယငျးအပွောငျးအလဲဟာ အသငျးရဲ့ အခွအေနကေို ပိုကောငျးလာစပေုံ မရခဲ့ပါဘူး။ B8 ဟာ မကွာသေးမီက ယှဉျပွိုငျကစားခဲ့တဲ့ Epic Prime League Season 1 နဲ့ WePlay! Pushka League S1: Division 1 တို့ရဲ့ BO3 ပှဲစဉျမြားမှာ ၂ ပှဲပွတျ အရှုံးပေါငျးမြားစှာ ရငျဆိုငျခဲ့ရပွီး ယခုဆိုရငျ ရှုံးပှဲပေါငျး ၁၁ ပှဲဆကျတိုကျအထိရှိလာခဲ့ပါပွီ။
ယခုနှဈအတှငျးမှာ B8 ဟာ Dendi ရဲ့အသငျးဟောငျး Na’Vi နဲ့ ၄ ပှဲ တှဆေုံ့ယှဉျပွိုငျကစားခဲ့ပွီး ၄ ပှဲလုံး ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပါတယျ။ Nigma နဲ့ ၄ ပှဲ ယှဉျပွိုငျကစားခဲ့ရမှာလညျး ၄ ပှဲလုံး ရှုံးနိမျ့ခဲ့သလို Team Secret နဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့တဲ့ ၂ ပှဲလုံးလညျး ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပါတယျ။ တညျထောငျခြိနျတညျးက ယခုအခြိနျထိ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျအမြားစုမှာ B8 ဟာ ရှုံးနိမျ့မှုမြားကိုသာ ရငျဆိုငျနခေဲ့ရပါတယျ။
B8 Matches in April
Dota2လောကအတှငျးမှာ ရှုံးပှဲမြားစှာဆကျခွငျးဟာ အသငျးရဲ့ရပျတညျရေးအတှကျ အနှောငျ့အယှကျအဟနျ့အတားဖွဈလာစပေါတယျ။ ယခုနှဈဖဖေျောဝါရီလကမှ ပွနျလညျထူထောငျထားခဲ့တဲ့ EternalEnvy ပါဝငျတဲ့ Cloud9 Dota2အသငျးဟာ ရလဒျဆိုးမြား ဆကျတိုကျကွုံတှခေဲ့ပွီးနောကျ ယခု အခြိနျမှာတော့ အသငျးပွနျလညျဖကျြသိမျးသှားခဲ့ပွီဖွဈပွီး ဒါဟာ ရှုံးပှဲဆကျအသငျးမြားနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ဥပမာတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။
မညျသို့ပငျဖွဈစေ B8 တို့ ယှဉျပွိုငျနခေဲ့ကွတဲ့ Epic Prime League Season 1 ရဲ့ အုပျစုပှဲစဉျမြားဟာ ပွီးဆုံးသှားခဲ့ပွီဖွဈလို့ playoff ပှဲစဉျမြားကို ဆကျလကျယှဉျပွိုငျကစားကွရဦးမှာပါ။ Dendi ကို ခတျေဟောငျးထဲက အားပေးလာခဲ့ကွတဲ့ ပရိသတျမြားကတော့ B8 အသငျးအခွအေနကေောငျးလာစဖေို့ မြှျောလငျ့လကျြရှိကွပါတော့တယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျတငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။
ရှုံးပွဲ (၁၁) ပွဲအထိ ဆက်လာနေတဲ့ Dendi ရဲ့ B8 အသင်း
ယခုနှစ်အစောပိုင်းကမှ စတင်ဖွဲ့စည်းထားခဲ့တဲ့ Dendi ရဲ့ B8 အသင်းဟာ လက်ရှိ Dota2ပြိုင်ပွဲများ အတွင်းမှာ ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေများကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ထဲက ယခုအချိန်ထိ အသင်းသားတစ်ဦးသာ အပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ B8 အသင်းရဲ့ လက်ရှိကစားသမားစာရင်းကတော့ Excalibur, Dendi, Ghostik, KingR နဲ့ LeBronDota တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
B8 အသင်းအပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့တာကတော့ ယခင်က ကစားသမားဟောင်း pio65 နေရာမှာ Excalibur ကို ထည့်သွင်းလိုက်တာပါ။ ဒါပေမယ့် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ယင်းအပြောင်းအလဲဟာ အသင်းရဲ့ အခြေအနေကို ပိုကောင်းလာစေပုံ မရခဲ့ပါဘူး။ B8 ဟာ မကြာသေးမီက ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ Epic Prime League Season 1 နဲ့ WePlay! Pushka League S1: Division 1 တို့ရဲ့ BO3 ပွဲစဉ်များမှာ ၂ ပွဲပြတ် အရှုံးပေါင်းများစွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ယခုဆိုရင် ရှုံးပွဲပေါင်း ၁၁ ပွဲဆက်တိုက်အထိရှိလာခဲ့ပါပြီ။
ယခုနှစ်အတွင်းမှာ B8 ဟာ Dendi ရဲ့အသင်းဟောင်း Na’Vi နဲ့ ၄ ပွဲ တွေ့ဆုံယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီး ၄ ပွဲလုံး ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ Nigma နဲ့ ၄ ပွဲ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ရမှာလည်း ၄ ပွဲလုံး ရှုံးနိမ့်ခဲ့သလို Team Secret နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ၂ ပွဲလုံးလည်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ တည်ထောင်ချိန်တည်းက ယခုအချိန်ထိ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်အများစုမှာ B8 ဟာ ရှုံးနိမ့်မှုများကိုသာ ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရပါတယ်။
Dota2လောကအတွင်းမှာ ရှုံးပွဲများစွာဆက်ခြင်းဟာ အသင်းရဲ့ရပ်တည်ရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်အဟန့်အတားဖြစ်လာစေပါတယ်။ ယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကမှ ပြန်လည်ထူထောင်ထားခဲ့တဲ့ EternalEnvy ပါဝင်တဲ့ Cloud9 Dota2အသင်းဟာ ရလဒ်ဆိုးများ ဆက်တိုက်ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးနောက် ယခု အချိန်မှာတော့ အသင်းပြန်လည်ဖျက်သိမ်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဒါဟာ ရှုံးပွဲဆက်အသင်းများနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ B8 တို့ ယှဉ်ပြိုင်နေခဲ့ကြတဲ့ Epic Prime League Season 1 ရဲ့ အုပ်စုပွဲစဉ်များဟာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်လို့ playoff ပွဲစဉ်များကို ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြရဦးမှာပါ။ Dendi ကို ခေတ်ဟောင်းထဲက အားပေးလာခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်များကတော့ B8 အသင်းအခြေအနေကောင်းလာစေဖို့ မျှော်လင့်လျက်ရှိကြပါတော့တယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။